Nayakhabar.com: अत्यधिक गुलियो खाँदा हुने ६ हानी, तिहारमा के खाने के नखाने ?
अत्यधिक गुलियो खाँदा हुने ६ हानी, तिहारमा के खाने के नखाने ?
काठमाडौं । तिहारमा अत्याधिक गुलियो राखिएका परिकार खाने प्रचलन छ । पछिल्लो समयमा तिहारमा पकाइने परिकारमा कृतिम गुलियो राखिने भएकाले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । अत्याधिक गुलियोले गर्ने हानी यसप्रकार छन् ।
सुगरको कुलतः निरन्तर अत्याधिक गुलियो सेवन गर्नुको अर्को हानी भनेको सुगरको कुलत अर्थात् गुलियो खाने बानी लाग्नु हो किनभने जति बढी चिनी खाइन्छ, त्यति अझै खाने चाहना बढ्छ । निरन्तर गुलियो परिकार खाँदा शरिर र दिमाग लठ्ठ हुन्छ ।
अस्वभाविक तौल बृद्धि स् सम्भवत तपाईलाई थाहा होला चिल्लोले शरिरलाई मोटो बनाउँदैन, बरु अरु समस्या ल्याउँछ । तर गुलियो खाँदा केही दिनमा नै अस्वभाविक तौल बढ्छ । सुगर र परिष्किृत कार्बोहाईड्रेडले शरिरको तौल ह्वात्तै बढाउँछ । तौल घटाउन न्यून फ्याटयुक्त डाइट खानु भएको छ तर गुलियो र अन्य कार्बोहाईड्रेड खान रोक्नु भएको छैन भने तौल घट्दैन, बरु बढ्छ । गुलियोले आमाशय (गट) मा समेत अशर गरी तौल घट्नबाट रोक्छ ।
गुडमा बनाएको मिठाई नै किन खाने